(tonga teto avy amin'ny Pakistan)
Pakistàna dia firenena any amin'ny faritra atsimon' i Azia. Izany dia manaraka ny India, Iràna, Afghanistàna, ary Sina. Izany no fomba ofisialy antsoina hoe ny Repoblika Islamikan' i Pakistàna. Manana morontsiraka lavitra manamorona ny Ranomasina Arabia any atsimo. I Pakistàna dia manana ny isam-ponina fahaenina lehibe indrindra eto amin'izao tontolo izao. Ny velarantany manontolon' i Pakistàna dia 880.940 km² (miaraka amin' ny tany entin' i Pakistàna Azad Kashmir ary ny Gilgit Baltistàna). Izany dia manao an' i Pakistàna ho firenena faha-34 lehibe indrindra eto amin' izao tontolo izao. Islamabad no renivohitr' i Pakistàna, ary ny tafika pakistaney dia fahafito lehibe indrindra. Atao hoe Pakistaney na Pakistaný ny mponina ao Pakistàna.
Ny anarana hoe Pakistàna amin' ny fiteny ordoa sy fiteny persana dia midika "tanin'ny madio".
Ny mponin' i Pakistana dia tokony ho 167 800 000 tamin’ny taona 2008. Eo amin’ ny 1,9 % eo ny fitombon'ny mponina raha 3% izany tamin' ny taona 1980. Mpifindra monina any ivelany, indrindra mankany amin’ ny Fanjakana Mikambana (Angletera) sy Amerika Avaratra ary Arabia Saodita sy ireo firenena ao amin’ny Helodrano Persika, ny Pakistaney. 2,3 % izany tamin'ny taona 2017. Miisa any amin'ny 207 000 000 ny mponina ao Pakistàna tamin'ny taona 2017.
Ny vahoaka pakistaney dia fitambarana vahoaka maro, izay manana ny maha samihafa azy amin'ny lafiny kolontsaina sy ny fiteny. Efatra ny karazan'olona maro an'isa indrindra mitambatra hamorona ny Pakistaney, dia ny Penjaby izay mahasahana ny antsasa-manilan'ny mponina; ao koa ny Patàna na Pastona izay 15%n'ny mponina; ao koa ny Sindy izay 15%n'ny mponina; ary ny Balotsy 5 %n'ny mponina.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Pakistàna&oldid=1011729"
Voaova farany tamin'ny 16 Mey 2021 amin'ny 14:49 ity pejy ity.